Wararka - Nooca Saliida ah Gaarigeygu Ma Qaadaa?
Go'aaminta saliida mootada ugufiican gaarigaaga ha ahaato mid isku dhafan, isku-dhafan isku-dhafan, masaafad-sare ama saliid caadi ah, waxay kuxirantahay dhowr arrimood. Qaarkood waa arrimo dibadeed, sida cimilada aad ku nooshahay, caadooyinkaaga wadista baabuurka, ama xitaa da'da mashiinkaaga. Waxyaabaha kale ayaa lagu hagaajiyaa iyada oo ku saleysan nooca mashiinka gaarigaaga iyo qeexitaannada soo-saaraha. Tani waxay ka badan kartaa intii aad rabtay inaad ka ogaato noocyada saliidda ee baabuurta lagu isticmaalo, laakiin u dhaaf Firestone Complete Auto Care si ay kuu siiso macluumaad dhameystiran oo ku saabsan gaarigaaga. Uma baahnid inaad khabiir ku ahaato saliidda mootada. waa sababta aan halkan u joogno. Booqo ama ballan ka sameyso xaafaddaada Firestone Complete Auto Care maanta. Xirfadlayaasheena taayirrada iyo adeegga baabuurta marwalba waxay diyaar u yihiin inay kuu adeegaan!
Noocyada Saliidda Gawaarida
Waxaa jira afar nooc oo saliid guud ah:
Saliid Gawaarida Dheeraadka ah oo Buuxda
Saliida dardaaranka oo buuxa waxay ku habboon tahay gawaarida u baahan waxqabadka heerka ugu sarreeya iyo heerarka sare ee saliidda. Saliida macmalka ah ee buuxa waxay bixisaa heerar nafsaaniga ah oo sareeya, iska caabinta qiijiinta iyo burburka kuleylka, waxayna ka caawisaa la dagaallanka dhoobada saliidda. Waxaa intaa sii dheer, waxay ka caawineysaa hagaajinta waxtarka shidaalka waxayna xitaa kordhin kartaa awood hoosaadka gawaarida iyadoo la yareynayo jiiditaanka mishiinka
Sababtoo ah saliida mootada synthetic waxay ku kici kartaa laba ilaa afar jeer wax ka badan saliida caadiga ah, kala hadal farsamayaqaanada haddii ay tahay saliida saxda ah ee gaarigaaga. Haddii aad ku nooshahay cimilo leh qabow aad u daran ama xagaa aad u kulul, ama u isticmaal gaarigaaga jiido ama jiidid, saliida macmalka ah ayaa noqon karta nooca saliida ugu fiican gaarigaaga. Mashiinnada duugga ah ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara saliidda dardaaranka ah, maadaama ay kaa caawin karto kahortagga dhoobada waxyeelada leh ee qaar ka mid ah matoorada duugga ah ay u muuqdaan kuwo u nugul.
Isku dar dardaro Saliida Gawaarida
Saliida isku dhafan ee 'synthetic oil' waxay bixisaa sida ugu fiican labada adduun. Waxay leedahay astaamo badan oo saliidda synthetic oo buuxa ah, laakiin qiimo aad uga hooseeya. Saliida noocan ahi waa isku dar ah saliidaha aasaasiga ah ee loo yaqaan 'synthetic' iyo kuwa caadiga ah, oo lagu daray qaar ka mid ah wax lagu daro, iska caabinta dheeraadka ah ee qayilaadda iyo sifooyinka heerkulka hooseeya ee aadka u wanaagsan. Isku-darka isku-darka ayaa u fududeynaya darawalada inay ka beddelaan ka caadiga uguna beddelaan saliidda synthetic, waana sababtaas sababta saliidda noocan ah ay ugu sii kordhayso caan ka mid ah darawalada maanta ugu xariifnimada badan. Sidoo kale waa meel dhexe oo weyn oo wadayaasha ah ee doonaya ilaalin dheeraad ah iyo waxtarka saliida synthetic, laakiin laga yaabee inaysan diyaar u aheyn inay biilka ku biiriyaan wadarta guud ee ku beddelashada saliida synthetic oo buuxa.
Saliida Caadiga ah
Saliida caadiga ah waa nooca ugu badan ee saliida la isticmaalo. Waxay ku habboon tahay laydh-yar, gawaari nooca dambe ah oo masaafo yar u dhexeysa illaa celcelis ahaan iyo naqshad injineer fudud.
Saliida Gawaarida Sare ee Masaafada Sare
Saliida masaafada sare waxaa si gaar ah loogu talagalay baabuurta in ka badan 75,000 mayl. Saliida noocan ah waxay kaa caawin kartaa yareynta isticmaalka saliida, waxay yareyn kartaa qulqulka iyo qubashada saliida, waxayna sidoo kale kaa caawin kartaa yareynta qiiqa iyo qiiqa ku jira matoorada duugoobay.
Noocyada lagu daro Saliida
Saliidaha mootooyinka sida caadiga ah waxaa kujira waxyaabo yar oo lagu daro kuwaas oo kadhigi kara inta udhaxeysa 5% iyo 30% saliida. Waxyaabaha lagu daro waxay gacan ka geystaan ​​kobcinta waxqabadka saliidda. Saliidaha mootada waxaa ku jiri kara waxyaabaha soo socda:
Antioxidants: Waxyaabaha lagu daro antioxidantku waxay u shaqeeyaan inay yareeyaan qiijiyeynta iyo sameynta dhigaal ee saliidda mootada. Waxay kaloo ka caawiyaan nadaafadda mishiinka iyo kordhinta nolosha saliidda matoorka.
Agents Wakiilada kahortaga dharka: Wakiilada kahortaga dharka waxay caawiyaan ilaalinta qaybaha mashiinka gaar ahaan u nugul waxyeelada kuleylka, sida darbiyada silsiladda, wiishka, kamaradaha, iyo giraanta bistoolada. Ku daristani waxay u dhaqantaa sidii lakab difaac ah oo ku wareegsan qaybahaan si loo xadido khilaafaadka xaaladaha biraha-birta ah.
Daaqeeyayaal: Ku daridaani ma aha sida dharkaaga dharka lagu dhaqo oo kale! Waxay diiradda saaraysaa ka-hortagga dhigaalka, miridhku, iyo daxalka inay ka samaysmaan aagga giraanta bistoolada, piston-taaj hoostiisa, iyo meelaha kale ee u muuqda inay kululaanayaan.
■ Kala firidhsan: Kani waa maadadaada sixirka. Waxay saliidaada siinaysaa awood uu ku nuugo oo ku haysto wasakhda adag si aanu u dhaawicin mishiinka.
Ka hortagga xumbo: Ku daristaani waxay u egtahay sida ay u eg tahay. Ka hortagga xumbo-xumadu waxay saliidda mootada ka ilaalisaa inay sameysmaan xumbo iyo goobooyin. Haddii xumbo iyo goobooyin ay samaysmayaan, saliidu ma awoodi karto inay xirto qaybaha muhiimka ah ee mashiinka oo ay qaboojiso.
Beddelaadaha khilaafku: Wax ka beddelayaasha khilaafku waxay gacan ka geystaan ​​yareynta khilaafka marka mashiinkaaga uu ku shaqeynayo heerkul sarreeya iyo culeysyo culus. Ku daridaani waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad kordhiso waxtarkaaga shidaalka.
Dhibcaha dhibcaha: Ku daridaani waxba kama qaban karto daadinta dhabta ah ee saliidaada. Xaqiiqdii, niyad jabka dhibcaha ayaa kaa caawinaya kahortagga walxaha kujira saliida inay adkaadaan xaaladaha qabow. Natiija ahaan, saliidda matoorku waxay si xor ah u socotaa xitaa heerkul hoose, qabow mishiinkuna uma baahna inuu si adag u shaqeeyo si uu u shubto.
Itors miridhku-ka-hortagga daxalka: Qaybaha gudaha ee mashiinkaagu wuu miridh noqon karaa oo wuu qudhmi karaa marka ay soo gaadhaan asiidhyada iyo qoyaanka. Waxyaabaha lagu daro waxay ku abuuraan filim ilaalin ah mashiinkaaga qeybihiisa gudaha si looga hortago waxyeeladaas.
Impro Waxyaabaha ku-habboon ee Viscosity-index: Waxyaabahan lagu daro waxay ka caawinayaan saliidda mashiinkaaga inay u qabato sidii loogu talagalay in kasta oo isbedbedelka heer kulku.
Waqtiga boostada: Abriil-20-2021
Khatimidii Silicone Rubber, Qaybaha dayactirka, Xakameynta Gacan ku Qaadista, Qalabka Gawaarida, Qeybinta Qeybinta, Isku Xidhitaanka Cunsurka,